७० प्रतिशत मत ल्याएर जित्छु - Karobar National Economic Daily
७० प्रतिशत मत ल्याएर जित्छु
query_builderApril 9, 2017 8:59 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1244
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार शेखर गोल्छा । तस्बिर: कारोबार
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार शेखर गोल्छा मुलुकको सबैभन्दा पुरानो औद्योगिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
महासंघमा एसोसिएटतर्फको उपाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि श्रम ऐनका विवादित बुँदामा भिन्न राजनीतिक विचार बोकेका एक दर्जन ट्रेड युनियनसँग सहमति जुटाउने रोजगारदाता समूहको नेतृत्व रोजगारदाता परिषद्को सभापतिका हैसियतमा गोल्छाले नै गरेका थिए ।
नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसियसनका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका गोल्छा महासंघमा रहेर विभिन्न ऐन निर्माण पूरा गर्ने तथा व्यवसायीका समस्या समाधानमा लागिपर्ने बताउँछन् । सरकारसँग टेबुल ठटाएर नभई कन्भिन्स गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा राख्ने गोल्छासँग उनको चुनावी तयारी, एजेन्डा तथा केही विवादित विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानी ः
महासंघको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ, इतिहासमै पहिलो पटक वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा प्रत्याशी बन्नुभएको तपाईंको तयारी कहाँ पुगेको छ ?
हाम्रो सबै खाले तयारी पूरा भइसकेको छ । जिल्ला नगरका साथीहरूलाई उहाँहरूकै क्षेत्रमा गएर भेट्ने, उहाँहरूका समस्या बुझ्नेलगायतका काम पनि अलि पहिलेदेखि नै गरिरहेको थिएँ ।
यस्तै वस्तुगत क्षेत्रका साथीहरूसँग पनि भेटेर मैले उम्मेदवार बन्नु पहिले नै सल्लाह मागें, उहाँहरूका लागि भोलि महासंघमा गएर के गर्न सकिन्छ भनेर पनि सुझाव लिएको छु भने एसोसिएटमा त म पहिलेदेखि नै रहेको हुनाले यस क्षेत्रमा धेरै ध्यान दिनु परेन । हामी जिल्लामा जाँदा वा वस्तुगतका साथीहरू भेट्दा उहाँहरूले निकै राम्रो आतिथ्यता प्रदान गर्नुभयो ।
उहाँहरूलाई अब हाम्रो तर्फबाट पनि यस्तै स्वागत र सत्कार एकै ठाउँमा बसेर गर्न सकियोस् भनेर हामीले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका छौं र यहीँ रहेर हाम्रा अन्य तयारीहरू पूरा गर्नेछौं । समग्रमा भन्दा भवानी राणाको नेतृत्वमा रहेको हाम्रो टिमले आफ्नो तर्फबाट सबै खाले तयारी पूरा गरिसकेको छ । हामी केवल महासंघको साधारणसभा र निर्वाचन हुने दिन चैत २८ र २९ गते पर्खिरहेका छौं ।
महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सेरेमोनियलजस्तै छ, यस्तो बेलामा तपाईंहरूले छुट्टै टिम बनाएर वा एजेन्डा लिएर जानु कत्तिको औचित्यपूर्ण होला ?
यसैका लागि नै मैले अब अध्यक्ष हुन लाग्नुभएका भवानी राणाको कार्यकाल सफल बनाउने र उहाँलाई पूर्ण समर्थन गर्ने भन्ने नै पहिलो एजेन्डा बनाएको छु । त्यसैले हामीले जेजस्ता एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छौं, त्यो भवानी राणाज्यूको स्पिरिटसँग मेल खाने नै छन् ।
अर्कातर्फ म चेम्बर आन्दोलनमा लागेको २ दशक भइसकेको छ र उद्योग वाणिज्य महासंघमै पनि १० वर्ष बिताइसकेकाले यो संस्थाप्रति मेरा पनि केही जिम्मेवारी छन् ।
मेरो स्वर्गीय बुबा (हुलासचन्द गोल्छा) ले जुन सपना देख्नुभएको थियो, ५२ वर्षअघि उद्योग वाणिज्य महासंघ यस्तो होस् भन्ने कल्पना गरिएको थियो र मेरो बुबाले पनि यो कल्पना पूरा गर्न धेरै मेहनत गरेर समय पनि दिनुभएको थियो, म त्यसलाई पूरा गर्न नै नेतृत्वका लागि प्रयास गरिरहेको हुँ ।
मैले साना, मझौला, ठूला सबै खाले उद्योगको समस्या र पीडा नजिकबाट बुझेको छु । एजेन्डाकै कुरा गर्नुपर्दा मैले सचिवालय सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु भने जिल्ला नगरसँग समन्वय मेरो दोस्रो प्राथमिकता हो । यस्तै, महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनु छ भने यसबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउन पनि निकै सजिलो हुनेछ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
म एक दशकदेखि महासंघमा रहँदा विभिन्न ऐन निर्माणमा काम गर्ने मौका पाएँ । सरकारले बनाउने ऐनमा महासंघका तर्फबाट सल्लाह–सुझाव दिनेदेखि कतिपय ऐन निर्माणमै संलग्न हुने अवसर पनि पाएँ ।
अहिलेको संविधानअनुसार ती ऐनको रूपान्तरण गर्नेदेखि नयाँ ऐन ल्याउनेलगायतका कामको जिम्मेवारी मेरै काँधमा छ जस्तो लाग्छ । कतिपय ऐन पूरा भएर पनि संसद्बाट पारित हुन सकेका छैनन् भने कतिको काम आधा मात्रै पूरा भएको छ र कतिपय पूरा हुने क्रममा छन् । त्यसैले यी अधुरा काम पूरा गर्न पनि म महासंघमा जानैपर्ने देखेको छु ।
महासंघमा तपाईंहरूबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा बहालवाला अध्यक्ष र अब हुन लाग्नुभएका अध्यक्ष तपाईंहरूको पक्षमा यसरी खुलेरै लाग्नुलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? यो कत्तिको स्वाभाविक हो ?
यसलाई म कसरी हेर्छु भने हामी चेम्बर आन्दोलनमा समान लक्ष्य र उद्देश्यका साथ आएका छौं । मूलतः निजी क्षेत्रको पक्षमा लबिङ गर्ने र उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने नै हाम्रो लक्ष्य हो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुनै एक समूहमा यसरी खुलेर लाग्नुलाई म आफ्नो र टिमको सौभाग्य सम्झन्छु । यसमा व्यक्तिगत सम्बन्धले होइन कि हामीले त्यो समान लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न सक्छौं भन्ने उहाँहरूलाई विश्वास भएको हो ।
अर्कातर्फ महासंघमा यो नयाँ कुरा पनि होइन, फर्केर हेर्नुहुन्छ भने धेरैजसो पूर्वअध्यक्षले यसो गर्नुभएको छ । महासंघको माया गर्नेले आपूmपछिको नेतृत्व पनि सक्षम र सबल आओस्, महासंघले झन् उचाइ हासिल गरोस् भनेर अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन र आफूले हस्तान्तरण गर्ने नेतृत्व सही व्यक्तिको हातमा जाओस् भनेरै उहाँहरूले यसो गर्नुभएकाले मैले यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिएको छु ।
महासंघमा रहँदा यहाँले के त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, जसका कारण महासंघको सिंगो संस्थापन पक्ष तपाईंको पक्षमा उभियो ? साथै, तपाईंका मतदाताले पनि तपाईंको विगतको कुन काम देखेर मत दिने ?
मैले पछिल्ला दिनमा रोजगारदाता परिषद्को सभापतिका रूपमा काम गरें । यहाँ रहँदा मैले श्रम ऐनको मस्यौदा तयार गरें । त्यो पनि सबै राजनीतिक पार्टीका ट्रेड युनियनसँग मिलेर नै ।
सबै राजनीतिक दल एउटै मुद्दामा चारतिर फर्कने बेलामा मैले उनीहरूका भ्रातृ संगठनलाई सहमत गराएर श्रम ऐनको मस्यौदा सर्वसम्मत रूपमा तयार गरें । यसमा श्रम लचकता, नो वर्क नो पे, कामदार कटौतीदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मलाई एउटै प्याकेजमा समाधान एकै ऐनले गरेको छ । यसबाहेक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सेज ऐनलगायत त पारित भइसकेका छन् ।
पाइपलाइनमा रहेका विदेशी लगानी ऐनलगायतका काम धेरै अघि बढेका छन् । पछिल्ला वर्षमा श्रम सम्बन्धमा सुधार भएको छ, बन्द–हड्तालका क्रम धेरै घटेका छन् । यसको सम्पूर्ण श्रेय म एक्लैले लिन चाहन्नँ, तर पक्कै पनि सरोकारवालाका नाताले मेरो यसमा प्रमुख भूमिका थियो भन्नेचाहिँ दाबी गर्न सक्छु ।
मैले किन निजी क्षेत्रको नेतृत्व लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ भने मेरो परिवार नै चेम्बर आन्दोलनमा लागेको छ । मेरो परिवार चेम्बर आन्दोलनको स्टेकहोल्डर्स हो तर नेतृत्वमा कहिल्यै पुगेको छैन, त्यसैले पनि मैले यसपटक नेतृत्वको दाबी गरिरहेको छु । यस्तै, महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार तथा विदेशी लगानीका लागि पनि मैले जति बुझेको छु त्यो अनुभव, शिक्षा र दूरदृष्टिका कारणले म नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ ।
तपाईंमाथि प्रतिस्पर्धीभन्दा ‘जुनियर’ भन्ने पनि आरोप छ नि ?
उमेरले मात्र सिनियर र जुनियरको परिभाषा खोज्ने हो भने त सबैभन्दा बुढो मान्छे जो छ त्यसैलाई ल्याएर देशको प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने हो । महासंघमा पनि ज्येष्ठ व्यवसायीलाई नै ल्याएर अध्यक्ष बनाइन्थ्यो होला । मलाई लाग्छ, काम गर्ने क्षमता महŒवपूर्ण कुरा हो ।
म विभिन्न चेम्बरमा लागिसकेको दुई दशक भइसक्यो भने महासंघमै पनि १० वर्षभन्दा बढी बिताइसकेको छु । मैले महासंघमा आएर के–के गरें, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गरें कि संस्था र समग्र निजी क्षेत्रको हितका लागि गरेको छु भन्ने पनि मूल्यांकन आवश्यक ठान्छु ।
अनुभवको कमी ममा छैन । त्यसमाथि म एउटा त्यस्तो अर्गनाइजेसनबाट आएको छु कि जसले नेपालमा औद्योगीकरणको थालनी गरेको छ, जसले अहिले पनि १७ हजारलाई रोजगारी दिइरहेको छ । मलाई लाग्छ, योभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेकाले मात्र वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने कहीँ लेखेको छैन ।
महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्यदेखि एसोसिएट उपाध्यक्षसम्ममा सधैं लोकप्रिय मत ल्याउनुभयो, यसपटक इतिहास दोहोरिएला ?
मलाई विश्वास छ कि मेरो पहिलाको जितभन्दा पनि यसपटक सहज हुनेछ । पहिलेभन्दा फराकिलो अन्तरले म जित हासिल गर्नेछु । मैले आँकलन गरेअनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी नै मत मेरो आउनेछ । मलगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमले सहज जित हासिल गर्नेछ ।
तपाईंको सबैभन्दा बलियो र कमजोर क्षेत्र कुन हो जस्तो लाग्छ ?
कमजोर भन्ने नै छैन । एसोसिएट मेरो पहिलेदेखिकै स्ट्रेन्थ भएको क्षेत्र हो । जिल्ला नगरमा पनि निकै राम्रो भएको छ भने वस्तुगतमा पनि धेरै साथीको साथ, सहयोग र माया पाएकाले मलाई कुनै क्षेत्रमा कमजोर छु भन्ने नै लाग्दै छ ।
तर, तपाईंलाई पहिलेदेखि नै लाग्दै आएको आरोप के छ भने जिल्ला नगरसँग टाढै बस्न रुचाउनुहुन्छ !
यो कुरा मान्न म तयार नै छु, तर यो किन भयो भन्नेतिर पनि जानुपर्छ । मेरो जिम्मेवारीमा कहिल्यै जिल्ला नगर पर्दै परेन र त्यहाँ जाने धेरै काम पनि परेन । म जिल्ला जान लागेको ६ महिना मात्रै भएको छ, तर जसरी म जिल्ला गएँ त्यहाँ जाँदा साथीहरूको मप्रतिको माया, सद्भाव, शुभेच्छा र समर्थनले एकदमै उत्साहित भएकैले मैले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यहाँ जाँदा पनि मैले के अनुभूति गरें भने हाम्रा समस्या समान छन् र समाधानका लागि समान दृष्टिकोण चाहिन्छ । मैले एसोसिएटमा बसेर गरेका कामहरू एसोसिएटका ८५१ सदस्यका लागि मात्रै थिएनन् । यसबाट जिल्ला नगर तथा वस्तुगतका साथीहरू पनि उत्तिकै लाभान्वित हुनुभएको छ ।
पछिल्लो ६ महिनाजति जिल्ला जुन रफ्तारमा जानुभयो, भोलिका दिनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो भने पनि यही रफ्तार कायम राख्नुहुन्छ ?
अहिलेको जसरी नै दौडनुपर्ने काम त नपर्ला तर आवश्यकताअनुसार अवश्य पनि जानेछु । अर्कातर्फ मेरो भौतिक उपस्थितिभन्दा पनि म उहाँहरूलाई के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने उहाँहरूको समस्या समाधान गर्न भने म चौबीसै घण्टा खट्न पनि तयार छु । जिल्ला नगरको समस्या केन्द्रले सुनिदिएन भन्ने कुनै गुनासो आउन नदिने प्रतिबद्धता तपाईंमार्फत नै जनाउन चाहन्छु ।
पछिल्ला दिनमा मुलुक संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ, महासंघलाई पनि सोहीअनुसार रूपान्तरण गर्ने तपाईंहरूको तयारी के छ ?
संघीयता कार्यान्वयन मुलुकका लागि जति चुनौतीपूर्ण छ, महासंघका लागि पनि सोहीबमोजिम रूपान्तरण गर्दै लैजानु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । हामीले विधानमा संशोधन त गरिसकेका छौं तर यो मात्र पर्याप्त छैन ।
हरेक प्रदेशमा कार्यालय खोल्नु आवश्यक छ तर प्रदेशको राजधानी टुंगो नलागी यो सम्भव छैन । प्रदेश संरचना कार्यान्वयन भयो भने महासंघ पनि बलियो हुन सक्छ । यसपछि महासंघमा सबै खाले व्यवसायी समेटिनेछन् । त्यसैले हामी यसका लागि तयार नै छौं ।
महासंघको निर्वाचनमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कुरा पनि आइरहन्छन् । यसपटक झनै बढेको पाइन्छ, कुनै पार्टीले ‘फलानोलाई जिताऊ है !’ भनेर ह्विप जारी गरेको अवस्था छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मुलुकको दुर्भाग्य भनौं, राजनीति हरेक क्षेत्रमा छिरेको छ । म के मान्यता राख्छु भने कमसेकम उद्योग वाणिज्य महासंघमा यो छिर्न हुँदैन । म कुनै पार्टीको सदस्य पनि होइन । मैले भोटकै लागि कुनै पनि पार्टीका नेतालाई भेटेको छैन । उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र रहेर एउटै विचार राख्नुपर्छ, एउटै एजेन्डा हुनुपर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्छु ।
आस्था एक ठाउँमा होला तर चुनाव जित्न अनि महासंघमा गएर उक्त पार्टीको नीति लागू गर्छु भन्ने त्यो दुस्साहस कसैले नगरे हुन्छ । अहिलेसम्म महासंघको साख बचेकै यही एकरूपताले गर्दा हो । जति हुन सक्छ, भोलिका दिनमा पनि महासंघभित्र यस्ता राजनीतिक विचारहरूलाई निषेध गरेरै अघि बढ्नुपर्छ ।
तपाईंमाथि महासंघको निर्वाचन जित्नका लागि आफ्नो ठूलो औद्योगिक घरानाको प्रभाव अलि बढी नै देखाइरहनुभएको छ भन्ने पनि आरोप छ नि ?
मैले ठूलो व्यावसायिक घरानाको सदस्य हुँ भनेर घमन्ड गर्न खोजेको होइन । मैले दुःख बुझेको छु मात्र भन्न खोजेको हो । आज देशमा रोजगारदाताको अवस्था के छ भनेर भन्न सक्ने त रोजगारदाताले नै हो ।
करसम्बन्धी कस्ता समस्या छन्, वाणिज्य क्षेत्रमा भन्सारदेखि बन्दरगाहसम्मका समस्या कस्ता छन् भन्ने कुरा त्यस व्यवसायमा संलग्न भएकालाई मात्रै थाहा हुन्छ । किन देशमा उद्योगहरू आइरहेका छैनन्, विदेशी लगानी किन आइरहेको छैन भन्ने मलाई थाहा छ र यी समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छु भनेर मात्र मैले यो उदाहरण पेस गरेको हुँ । यसलाई प्रभाव पार्न खोजेको भनेर अतिरञ्जित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो भने आउने दिनका चुनौतीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
चुनौतीहरू धेरै छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र जति चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ, निजी क्षेत्रका चुनौतीहरू पनि उस्तै हुन्छन् । त्यसैले सरकारसँग सहकार्य गरेर दिगो आर्थिक विकास गर्नु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता र चुनौती पनि हो ।
निजी क्षेत्रका समस्या एकपछि अर्को गरी थपिँदै गएका छन्, यसका लागि सरकारसँग टेबुल ठटाएर होइन, सरकारका मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गराएर नै समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वास राख्छु ।
अर्कातर्फ सरकार र निजी क्षेत्रलाई एकै सिक्काका दुई पाटा भनिए पनि म त सिक्काका एकै पाटा भन्न रुचाउँछु, किनभने हाम्रो लक्ष्य एउटै छ । त्यसैले सरकारलाई गाली गरेर भन्दा पनि सहकार्य गरेर, कन्भिन्स गरेर, टेबुल टक गरेरै समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वास गर्छु र त्यहीअनुसार आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछु ।
म यसकारण वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने ५ आधार के–के हुन् ?
पहिलो— म युवा छु, काम गर्ने जोस, जाँगर र भिजन छ । दोस्रो— म औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको प्रमुख स्टेकहोल्डर्स पनि हुँ, मैले दुःख बुझेको छु । साना–मझौला सबै खाले उद्योग गरेकाले यस क्षेत्रको समस्या बुझेको छु ।
तेस्रो— मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि छ, महासंघसँग भावनात्मक रूपमा जोडिएको छु । मेरा बुबा र दाइहरू ६० वर्षदेखि चेम्बर आन्दोलनमा लाग्नुभएको छ । मसँग त्यो लिगेसी छ र भावनात्मक रूपमा मेरो परिवार नै महासंघमा जोडिएको छ । चौथो— म यस्तो टिममा छु कि भवानी राणालगायत हामी सबै महासंघमा रहँदा केही गरेर देखाऔं भन्ने लागेर नै आएका छौं ।
हामीलाई व्यक्तिगत फाइदा लिनु केही छैन, जे गर्छौं सबै निजी क्षेत्रकै लागि गर्नेछौं भन्ने दृढ अठोट मसहित हाम्रो टिममा छ । पाचौं— विगतमा महासंघमा रहँदा मैले जुन जिम्मेवारी पाएँ र त्यो कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको छु । भोलिका दिनमा त्यो अनुभव र उपलब्धिलाई थप संस्थागत गर्दै महासंघको गरिमा माथि उठाउने प्रण गर्छु ।
निर्वाचन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उम्मेदवार शेखर गोल्छा